ဖြဲသိပ်မုန့် လုပ်စားကြရအောင် | Wutyee Food House
« အမဲသားလုံး ဟင်းချို
February 22, 2010 by chowutyee
ဘိတ်လိုကတော့ ဖြဲသိပ်မုန့်လို့ခေါ်ကြတယ်… ရန်ကုန်မှာတော့ ဖြဲသိပ်မုန့်ကို ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ ၀တ်ရည်လည်း မသိလို့ ဘိတ်လိုပဲ ရေးလိုက်တာ.. ဖြဲသိပ်မုန့်ကို ၀တ်ရည်အရမ်းကြိုက်လို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ခဏခဏ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ အပြင်မှာ ရောင်းတာတော့ သိပ်မတွေ့လို့ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားနိုင်အောင် တင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. အစာပြေအနေနဲ့ နေ့လည်မှာ အချိန်တိုတိုအတွင်း လုပ်စားကြည့်ကြရအောင်…
၁။ ကောက်ညှင်းမှုန့် – ၁၆၀ ဂရမ်
၂။ ဆန်မှုန့် – ၂၀ဂရမ်
၃။ မြေပဲ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း (အခွံမပါ)
၄။ နှမ်း – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၅။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၆။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံ၁ပုံ
၂။ ပြီးမှ ရေတစ်ခွက်ခန့်ကို နည်းနည်းခြင်းဆီ ထည့်ပေးပြီး မပျော့မမာ အနေထားထိ ရောက်အောင် သမအောင် နုယ်ပေးပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်၍ သမအောင် ထပ်နုယ်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် နုယ်ထားသော ကောက်ညှင်းမှုန့်များကို ပုံတွင် ပါသည့် အရွယ်အတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ။
၅။ ပေါင်းအိုး တစ်ခုထဲ ငပျောရွက်များ ပေါ်တင်ပြီး ၁၀မိနစ်ခန့်ပေါင်းပေးပါ။
၆။ ပေါင်းနေစဉ်အတွင်း အစာသိပ်ရန် (မြေပဲ၊ နှမ်း၊ သကြား၊ ဆား)များကို မညက်တညက် ငရုတ်ဆုံထဲ ရောထောင်းပေးပါ။ ပြီးလျှင် ခွက်တစ်ခုထဲ ပြောင်းထည့်ထားပေးပါ။
၇။ ပေါင်းအိုးထဲမှ ပေါင်းထားသော ကောက်ညှင်းများကို မထုတ်မီ လက်တွင် ဆီအနည်းငယ်သုတ်ပြီးမှ ထုတ်ယူပါ။
၈။ ပြီးလျှင် လုံးထားသော ကောက်ညှင်းလုံး အလယ်ကို ကတ်ကြေးဖြင့် ညှပ်လိုက်ပါ။
၉။ ထို့နောက် အစာသိပ်ရန် (မြေပဲ၊ နှမ်း၊ သကြား) ရောထောင်းထားသော ခွက်ထဲသို့ ထည့်၍ ကောက်ညှင်းလုံးများကို ထည့်၍ (မြေပဲ၊နှမ်း၊ သကြား) ကပ်သွားအောင လက်ဖြင့်လိမ့်ပေးပါ။
၁၀။ ပြီးလျှင် ကောက်ညှင်းလုံးခွဲထားသော ထဲသို့ အစာများကို သိပ်ထည့်ပေးပါ။
၁၁။ အချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲ အစာပြေအဖြစ် စားနိုင်သော ဖြဲသိပ်မုန့်ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး။…
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 38 Comments
on February 22, 2010 at 6:26 pm | Reply Hmone
wow wow wow it is my favourite food…even at burma, u can’t buy at anywhere…. thx for uploading
on February 23, 2010 at 3:23 am | Reply chowutyee
မှုံကြီး ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ကျွေးလိုက်အုန်း 😉
on February 22, 2010 at 10:14 pm | Reply Hmone
do u know how to ကောက်ညှင်းမှုန့် at english?
on February 23, 2010 at 3:26 am | Reply chowutyee
ကောက်ညှင်းမှုန့်က Evy ပြောသလိုပဲ Glutinous Rice Flour .. ဆန်မှုန့်ကိုတော့ Pure Rice Flour လို့ခေါ်တယ်..း)
on February 24, 2010 at 11:38 am Hmone Gyi
ok thx…hopefully can get at indian shop…busy with project at the momnet may be try2weeks later…frd tawe ko ma treat bar buu..kha bar tar eat mar pot hee selfish urs twin lol
on February 23, 2010 at 12:52 am | Reply Evy
on February 23, 2010 at 3:24 am | Reply chowutyee
၀တ်ရည် အစားဝင်ကူဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပဲနော်း)
on February 23, 2010 at 2:32 am | Reply leo
ကျွန်တော့ အမကို သတိယလိုက်တာဗျာ။ အမ လုပ်တတ်တယ်ဗျ။ နာမည်ခေါ်တာတော့ မတူဘူး။ ကျွန်တော်လည်း နာမည် မေ့နေတယ်။ ဟီးး။ စားသွားတယ်။ ကျေးဇူးပဲ။
on February 23, 2010 at 3:28 am | Reply chowutyee
ဟားဟား.. ဟုတ်တယ် ဖြဲသိပ်က ဘိတ်ကခေါ်တာ ရန်ကုန်လို ဘယ်လိုခေါ်မှန်း မသိလို့.. စားသွားနော်၊ နောက်တခါကျ မြန်မာလုပ်တွေ ထပ်တင်အုန်းမယ်..း)
on February 23, 2010 at 4:08 am | Reply Ma Ei
ဘိတ် ( မြိတ် ) သူ လား။?
အဲဒီမုန့်မအိ လဲလုပ်စားဖြစ်တယ်။
on February 23, 2010 at 4:16 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် မမအိ ၀တ်ရည် အမေဘက်က အဘိုး၊ အဘွားတွေက ဘိတ်(မြိတ်)ကလေ.. ၀တ်ရည်ကတော့ ရန်ကုန်မှာပဲ ကြီးတာ.. 😉
on February 27, 2010 at 1:54 pm | Reply Ma Ei
မမအိ ရဲ့အဖေ နဲ့ အမေ က လည်းဘိတ် ကပဲ..ညီမရဲ့ ။ မမ ကတော့ ရန်ကုန်မွေး ရန်ကုန် မှာကြီးတာပဲ။ အခု ဒီအရွယ် over 40 ပဲရောက်နေပြီ ဘိတ်တောင် ၁ ခါ မှ မရောက်ဖူးဘူး။ မိဘ ၂ ဖက် လုံး က အမျိုးတွေ တောင် အခုထိ ဘိတ်မှာရှိနေကြ သေးတယ်။
on February 28, 2010 at 2:25 am | Reply chowutyee
မမအိတို့က ဘိတ်ကပဲလား.. ၀တ်ရည် အဖိုးက ဒါရိုက်တာ ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်လေ.. မမအိ အဖေနဲ့ အမေတော့ သိမယ်ထင်တယ်…း) ၀တ်ရည်လည်း တူတူပဲ မမအိ၊ ခုထိ တခါမှ ဘိတ်သွားမလည် ဖူးသေးဘူး.. ဟဲဟဲ .. အမေတို့ကတော့ အမျိုးရှိလို့ သွားလည်ပါတယ်၊ အမျိုးတွေကလည်း ဘိတ်မှာ သိပ်မရှိကြတော့တာနဲ့၊ ရန်ကုန်မှာ ပိုများလို့ မသွားဖြစ်တော့တာ။ 😉
on March 4, 2010 at 5:43 am | Reply နွေးနေခြည်
ဒါတခါမှ မစားဖူးဘူး။ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်တခုပဲ မှတ်ထားရမယ်း)
on March 4, 2010 at 5:58 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် တော်တော်များများ မစားဖူးဘူး နေခြည်… လုပ်စားကြည့်ပါလား လုပ်ရလွယ်၊ စားလို့လည်းကောင်းတယ်… 🙂
on April 8, 2010 at 8:22 am | Reply july
Name က မိုက်တယ် ဖြဲသိပ်မုန့် … 😀
i love it too …
on April 8, 2010 at 8:27 am | Reply chowutyee
on October 15, 2010 at 9:21 am | Reply aye aye nwe
on October 15, 2010 at 9:31 am | Reply chowutyee
AyeAyeNwe, ရိုးရိုးရေနဲ့ပဲ လုပ်ရတာ… 🙂
on October 16, 2010 at 9:22 am | Reply aye aye nwe
No problem par naw!
on January 12, 2011 at 6:55 pm | Reply ဆောင်း
မွှာကျီး ဆိုတဲ့တရုတ် မုန့် နဲ့ တူတယ်။ တရုတ်မုန့် ကတော့ ပြားပြား ၀ိုင်းဝိုင်းလေးတွေပေ့ါ
၀တ်ရည်ရေးထားတဲ့ ဟင်းတွေက အစုံဘဲနော် သဘောကျ လို့ ခဏခဏ လာဖတ်တယ်
on January 19, 2011 at 6:45 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါနော် မဆောင်း 😀
on January 19, 2011 at 7:18 am | Reply khin khin sein
ရန်ကုန်မှာ ဖြဲမုန်.လို.ခေါ်တယ်။ အမတို.ငယ်ငယ် လွန်ခဲ.တဲ.အနှစ် ၂၅-၃၀လောက်က လမ်းထဲကို ဦးလေးကြီးလာရောင်းတယ်။ အခုတော.မတွေ.ရတော.ပါဘူး။အမလည်း လုပ်စားကြည်.လိုက်အုန်းမယ်။ကျေးဇူးဘဲညီမ။
on January 19, 2011 at 8:35 am | Reply khin khin sein
ချက်ချင်းဘဲစားချင်စိတ်ပေါက်တာရယ်။ရန်ကုန်ကအမကြီး ဒီကိုအလည်လိုက်လာပြီး သူပါစားချင်တယ်ဆိုလို. လုပ်စားဖြစ်တယ်။
on January 20, 2011 at 2:37 am | Reply chowutyee
မခင်၊ ဟုတ်တယ် ရန်ကုန် တရုတ်တန်းနားမှာ အရင်တုန်းက ရောင်းတဲ့အတိုင်း အ၀ိုင်းအပြားသေးလေးတွေက ပိုစားလို့တောင် ကောင်းသေးတယ်.. ၀တ်ရည်က ပုံစံအမျိုးမျုိး လုပ်စားကြည့်တာပဲ.. Thanks par!!
on January 22, 2011 at 12:51 am | Reply chit2
love it, love it! i salute u,Ma Wut yee!i really appreciate it! i will do it this weekend!x
on April 7, 2011 at 9:27 pm | Reply ayeayemyo
၀တ်ရည်ကတော့ သွားရည်ကျအောင် လုပ်ပြီ၊ My favourite snack. I gonna to ask cwh to do it :P. တရုတ်တန်းမှာ အဲဒါကို မွှာကျီးလို့ ခေါ်တယ်၊ လမ်းမတော်ထိပ်မှာ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ရောင်းတတ်တယ်၊ ဟိုတစ်ခါပြန်လာတုန်းကတောင် ရှိသေးတယ်၊ သူက မနက်ပဲလား၊ ညနေပဲလား မသိဘူးရောင်းတာ၊ ခြင်းတောင်းလေးနဲ့
on July 5, 2011 at 8:45 am | Reply chatterbox
ညီမတို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အရမ်းကြိုက်ကြတယ်..မှတ်မှတ်ရရ ဆယ်တန်းတုန်းကလေ
ဖြဲမုန့် ရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးနောက်ကို ပြေးလိုက်ပြီး မုန့် ဝယ်ကြတာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို ချော်ပါလဲတယ်..:D
on August 2, 2011 at 12:29 pm | Reply ဇော်ခင်
on September 20, 2011 at 6:20 am | Reply dkfjekrli
ရန်ကုန်မှာ ပဲသိပ်မုန့်လို့ လဲ ခေါ်ပါတယ်
on September 20, 2011 at 8:42 am | Reply chowutyee
on September 21, 2011 at 3:36 am | Reply မ
မွှာကျိကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး emergency ဖက်.ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးနားမှာ ရှိတဲ့ကျောင်းကလေး မှာရောင်းတာတွေ့ ဖူးတယ်
on November 30, 2011 at 4:04 am | Reply Wint
အမသမီးတစ်ခါမှတော့မကြားဘူး– ဘူး စားလို့ကောင်းလားဟင်ပုံစံလေးက တော့ စား ချင် စရာလေးနော် အမလုပ်စားကြည့်မယ်သမီး
on February 2, 2012 at 1:17 am | Reply shingwangwi
ညီမရေ မုန့် ဦးနှောက်လုပ်နည်းလေးများရှိရင်မျှပေးပါလို့ 
on February 5, 2012 at 4:22 pm | Reply chowutyee
တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။ ဒါမေ့မယ့် ၀တ်ရည် လုပ်ဖြစ်တဲ့ ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါ့မယ်နော်.. 🙂
[…] February 22, 2010 ဖြဲသိပ်မုန့် လုပ်စားကြရအောင် […]